My Astro View: ၂ဝ၁၁ လည်ပြန်၊ ၂ဝ၁၂ ဟောကိန်း
၂ဝ၁၁ လည်ပြန်၊ ၂ဝ၁၂ ဟောကိန်း
ဒီဟောကိန်းအတိုင်းသာ ဆက်ပြီး အသက်ဝင်နေမယ် ဆိုရင် အိုဘားမားရဲ့ သမ္မတသက်တမ်း မကုန်ဆုံးခင် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလအထိ မြန်မာပြည်ရဲ့ အံ့ဘနန်း အပြောင်းအလဲတွေကို ဆက်လက် မြင်တွေ့ရဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။
၂ဝ၁၁ မြန်မာပြည်ကို ပြန်လှည့်ကြည့်ရင် အပြောင်းအလဲ ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို အထင်အရှား မြင်တွေ့ရမှာပါ။
တချိန်တခါက အများပြည်သူကြားထဲ ဘေးဘီကြည့်ပြီး တိုးတိုးကြိတ်ပြောရတဲ့ နိုင်ငံရေးဝေါဟာရတွေဟာ အခုတော့ ရေလဲသုံးတွေ ဖြစ်လာပါပြီ။ တချိန်က တစ်ယောက်တည်း ဆိတ်ငြိမ် အထီးကျန်နေခဲ့တဲ့ နေမင်းရဲ့သမီးတော် (ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်) ဟာ အများသူငါ မီဒီယာတွေ ရှေ့မှောက်ကို ခွန်အား အပြည့်နဲ့ ရောက်လာပါပြီ။
သတင်းစာဆရာ လူထုစိန်ဝင်းကတောင် ဂျာနယ်မျက်နှာဖုံးတွေအပေါ် နေရာယူအပြည့် ယူနေတဲ့ ဒေါ်စုကို Cover Girl အဖြစ် တင်စားခဲ့ပါသေးတယ်၊ တချိန်တုန်းက ရေးထုတ်ခဲ့သမျှ စာအုပ်တွေ အပိတ်ခံခဲ့ရတဲ့ ဟံသာဝတီ ဦးဝင်းတင်ကလည်း ထုတ်ဝေသူတွေအကြား မျက်နှာပန်းပွင့်နေတဲ့ Bestseller စာရင်းဝင် ဖြစ်နေပြန်တယ်။ ဆက်ပြောရင် စာနယ်ဇင်းသမားတွေ လေသံပေါက်လာမယ် ထင်ပါတယ်။
ဒီတော့ အတိုပဲ ချုပ်ပါမယ်။
မြစ်ဆုံဆည်စီမံကိန်း ရပ်နားထားဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ သမ္မတ၊ ရွေးကောက်ပွဲ ခတ်ကွင်းမှာ ပြန်ဝင်မယ့် ခွပ်ဒေါင်း ကြယ်ဖြူ၊ ဟီလာရီကလင်တန်ရဲ့ သမိုင်းဝင် ခရီးစဉ်တွေကို ပြန်တွေးကြည့်တဲ့အခါ မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်သူမှ ဘယ်သောအခါမှ အိပ်မက်တောင် မမက်ဝံ့၊ စိတ်ကူးတောင် မယဉ်နိုင်ခဲ့လောက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို တွေ့ရမှာပါ။ နိုင်ငံရေးနယ်ပယ်သာမကဘဲ စီးပွားရေးကဏ္ဍမှာလည်း ထင်ရှားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာ အမှန်ပါ။
ဒီလို အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်ပျက်လာမယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ မသိနိုင်သေးခင် အရိပ်အမြွက်မက ကြိုပြော နိုင်ခဲ့တဲ့ ဟောကိန်းတစ်ခု ရှိခဲ့ပါတယ်။
ဒါကတော့ မြန်မာ့ရိုးရာဗေဒင်နှင့် နက္ခတ်က ဆရာဇေယျာမောင်ရဲ့ အိုဘားမား အမည်ရတဲ့ ဆောင်းပါးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ဆောင်းပါးက အိုဘားမားသမ္မတ သက်တမ်းမှာ ဖြစ်ပျက်လာနိုင်တဲ့ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု အခြေအနေကို သုံးသပ်ခန့်မှန်းထားတာ ဆိုပေမဲ့ ဆောင်းပါးရဲ့ အဆုံးမှာတော့ မြန်မာပြည် အတွက် အနာဂတ်ဟောကိန်းကို ဟောသလို ပြတ်ပြတ်သားသား ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
"ကျနော်ကတော့ မြန်မာဗေဒင်ဆရာပီပီ အိုဘားမားရဲ့ အောင်နိုင်ခြင်းဟာ အမြင်မှာနမိတ် အတိတ်မှာ လက်ဆောင် အသံမှာ တဘောင် ဟူတဲ့ အယူတော်မင်္ဂလာအရ မဝေးလှသော ကာလမှာ ကမ္ဘာ့ပြည်သူများ ပါးစပ်ဖျားက အာမေဋိတ်သံဖြင့် အို . . . ဘားမား ဟု ရွှေပြည်ကြီးကို အံ့ဖွယ်ဘနန်း ချီးမွမ်း သြဘာ ပေးကြတော့မည်ကို ကြိုတင် မြင်ယောင်နေမိပါတော့တယ်။"
ကျွန်တော်တို့ အခု မြင်တွေ့ခံစားနေရတဲ့ အပြောင်းအလဲကို ဒီအယူတော်မင်္ဂလာဟောကိန်းက ဟိုးနှစ်တွေ တည်းက ဖော်ပြခဲ့တာပါ။ ဒီဟောကိန်းကိုရေးသားခဲ့ချိန်က လွန်ခဲ့တဲ့ ၃ နှစ်ကျော်လောက်ကပါ။ အတိအကျ ပြောရရင်တော့ ၂ဝဝ၈၊ အောက်တိုဘာ ၂၈ ရက်နေ့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဟောကိန်းအတိုင်းသာ ဆက်ပြီး အသက်ဝင်နေမယ် ဆိုရင် အိုဘားမားရဲ့ သမ္မတသက်တမ်း မကုန်ဆုံးခင် လာမယ့် နိုဝင်ဘာလအထိ မြန်မာပြည်ရဲ့ အံ့ဘနန်း အပြောင်းအလဲတွေကို ဆက်လက် မြင်တွေ့ရဖို့ပဲ ရှိပါတော့တယ်။ မကြာခင် ဧပြီလမှာလည်း ကြားဖြတ် ရွေးကောက်ပွဲက ရှိနေ၊ ဒေါ်စုကလည်း ရွေးကောက်ပွဲ ဝင်ပြိုင်မယ် ဆိုတာကိုး။ ပြီးတော့ အိုဘားမားကလည်း နောက်ထပ် ၄ နှစ် သမ္မတသက်တမ်း ထမ်းဆောင် ရဦးမယ် ဆိုရင်တော့ မြန်မာပြည်အတွက် အတိုင်းထက် အလွန်ပဲပေါ့။ မင်္ဂလာရှိတာတွေ၊ စိတ်ချမ်းသာ စရာတွေ ဆက်ဖြစ်လာပါစေလို့လည်း ဆန္ဒပြုမိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နိုဝင်ဘာလွန်လို့ အိုဘားမား သမ္မတသက်တမ်း ထပ်မတိုးနိုင်ဘဲ ရီပတ်ဘလစ်ကန်တွေဘက် အာဏာ လွှဲလိုက်ရမယ် ဆိုရင်တော့ အယူတော်မင်္ဂလာဟောကိန်းက ဘယ်လို အချိုးအကွေ့ဘက်ဆီ လှည့်သွားမယ် ဆိုတာ ရင်ခုန်ဖွယ် စဉ်းစားရတော့မှာပါ။
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂ဝ၁၁ ကို ဘေးခေါက်ထားတော့၊ လာမယ့် ၂ဝ၁၂ မှာ ဘာဖြစ်မယ် သိချင်သူများလည်း ရှိပါလိမ့်မယ်၊ အိုဘားမားနဲ့ ကျုပ်တို့ မြန်မာ (ဘားမား) တွေနဲ့ မပတ်သက်ချင်ဘူး၊ ကျုပ်တို့ကံ ကျုပ်တို့ ဇာတာက ဘယ်လိုများ ရှိသလဲ ဆိုသူများလည်း စိတ်အဆာပြေအောင်ပေါ့။ ဟောသမှာ ဟောကိန်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။ ဆရာအောင်ပိုင်ရဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဇာတာနှင့် အနာဂတ်ကံကြမ္မာတဲ့။ စိတ်ဝင်စားသူများ သွားဖတ် ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ သူ့ဟောကိန်းထဲက ကျွန်တော် စိတ်ဝင်စားတဲ့ စာပိုဒ်လေးတစ်ပိုဒ် ထုတ်ပြချင်ပါတယ်။
ထကြွမှု ပုန်ကန်မှု တော်လှန်မှု သူပုန်ထမှုတွေ များများစားစား ဖြစ်ပေါ်လာမယ် ပေါက်ကွဲမှုတွေ လက်နက်စွဲကိုင်မှုတွေ သွေးထွက် သံယိုအမှုတွေ ဖြစ်ကို ဖြစ်မယ်…. (ရာဟုသဘောထိုထကြွမှုများကို ပြည်သူတွေက လုပ်ဆောင်လိမ့်မည် ကောဇာစနေမြင်နေတာဖြစ်သောကြောင့် အောက်ခြေလူတန်းစားတွေ ရာဇ၀တ်သားတွေ ကြမ်းတမ်းသော စိတ်နေစိတ်ထားရှိသူတွေ အများဆုံးပါလိမ့်မယ်) အုပ်ချုပ်သူ လူတန်းစားတွေကိုပါ အကြီးအကျယ် ထိခိုက်မယ် တားလို့ မရ ပြင်လို့ မရနိုင်ပါ ကြမ်းကြုတ်စွာ ဖြေရှင်းမှုတွေ ပါပါလာမယ်
မြန်မာနိုင်ငံသားများလိုလားမှုများမှာ ၂၀၃၁ ကနေ ၂၀၅၁ အတွင်းမှာသာရရှိနိုင်ပါသည် သောကြာဒသာ စားတဲ့ အချိန် တနင်္ဂနွေ ဒသာစားတဲ့ အချိန် တနင်္လာဒသာစားတဲ့ အချိန် မှသာကောင်း နိုင်ပါမည်… ၂၀၃၁ ကနေ စပြီး တောက်လျှောက် ကောင်းလာပါမည်။
ဆရာဇေယျာမောင်ရဲ့ အယူတော်မင်္ဂလာ ဟောကိန်းအရ ကောင်းသော ချီးကျူးစရာ ဖြစ်သော အပြောင်းအလဲများကို ကျွန်တော်တို့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ဆရာအောင်ပိုင်ရဲ့ ၂ဝ၁၂ ဟောကိန်းအတိုင်း မြန်မာပြည်မှာ ဖော်ပြပါ အဖြစ်အပျက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်မလား။ အချိန်ကပဲ ဟောကိန်းတွေ မှန်၊ မမှန်ကို အဆုံးအဖြတ် ပေးသွားမှာပါ။
ကျွန်တော်ကတော့ ပုထုဇဉ်ပီပီ အကောင်းတွေကို စား၊ အကောင်းစားတွေ ဝတ်၊ အလန်းစား ကံကြမ္မာ တွေကို မျှော်လင့်ရင်း ၂ဝ၁၂ ကို ဖြတ်သန်းချင်ပါတယ်။ ကောင်းသော ဟောကိန်းတွေ အသက်ဝင် ဖြစ်တည် လာပါစေသားလို့လည်း သိုးဆောင်းတွေရဲ့ နှစ်သစ်ကူးမှာ ဆုတောင်းလိုက်ရပါတယ်ဗျား။
2013 or 2031 , 2015 or 2051 ?
2013 or 2031
2015 or 2051
is it typing wrong ?
Typing မှားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မူလ ဆောင်ပါးမှာကိုယ်က အဲသလို တွက်ချက်ဖော်ပြထားတာပါ။ ဒီမှာ မူလရင်း ဆိုဒ်ရဲ့ လင့်ခ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်